This forum has been closed. Comments There are no comments in this forum. Be first and add one နေ့စဉ်တီဗွီသတင်းလွှာ (၀၆-၂၀ -၂၀၁၃) နေ့ စဉ်တီဗွီ သတင်းလွှာ (၀၆-၂၀-၂၀၁၃)
ILO အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်က မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်တွေကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်တာ၊ မြန်မာတိုင်းရင်းသားဒုက္ခသည်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြန်လက်ခံဖိ်ု့ မြန်မာအစိုးရက စိတ်ဝင်စားမှုရှိပေမယ့်၊ ဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်နိုင်ဖို့အတွက်တော့ ဘာမှ အစီအစဉ်အတိအကျ မရှိသေးတာ၊ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၆၈ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကျင်းပတဲ့ နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အကြောင်း ... ထိပ်တန်းသတင်းများ လူမှောင်ခိုကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေးမှာ မြန်မာအခြေအနေ တိုးတက် ဆီးရီးယားသူပုန်ကို ထောက်ပံ့မယ့် စစ်ရေးအကူ အိုဘားမား ထုတ်ဖော်ခြင်းမရှိ ၆ ပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲ ပြန်စဖို့ မြောက်ကိုရီးယား လိုလား ပထမဆုံး လူ့အခွင့်အရေး ရုပ်ရှင်ပွဲတော် လူငယ်တွေဆုရ နျူကလီးယား လျှော့ချရေး ဘာလင် မိန့်ခွန်းမှာ အိုဘားမား တိုက်တွန်း တာလီဘန် အမေရိကန် ဆွေးနွေးပွဲ အာဖဂန်တက်ဖို့ ငြင်းဆို အများဆုံးဖတ်ရှုသည့် သတင်းများ ပထမဆုံး လူ့အခွင့်အရေး ရုပ်ရှင်ပွဲတော် လူငယ်တွေဆုရ မြန်မာဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်ပို့ရေး အစီအစဉ် အတိအကျမရှိ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ILO ကန့်သတ်ချက်အားလုံး ရုပ်သိမ်း ILO ကန့်သတ်ချက် ရုပ်သိမ်းမှုအပေါ် တုံ့ပြန်မှုအမျိုးမျိုး တာလီဘန် အမေရိကန် ဆွေးနွေးပွဲ အာဖဂန်တက်ဖို့ ငြင်းဆိုအများဆုံးအီးမေးပို့သည့် သတင်းများ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ILO ကန့်သတ်ချက်အားလုံး ရုပ်သိမ်းအများဆုံးကြည့်ရှုသည့် ဗွီဒီယိုသတင်းများ နေ့ စဉ်တီဗွီ သတင်းလွှာ (၀၆-၂၀-၂၀၁၃) ဒေါ်စု မွေးနေ့ အခမ်းအနားကျင်းပ လူ့အခွင့်အရေး၊ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ နှင့် နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော် အမေရိကန်နဲ့ မြောက်ကိုရီးယား နျူကလီးယားအရေး ကြာသပတေးနေ့ မြန်မာတီဗွီသတင်းများကမ္ဘာ့သတင်း စက္ကန့် ၆၀ VOA60 World